မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) - Home | Facebook
See more of မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) on Facebook
နည်းပညာများ ၊ ဖုန်း နှင့် ကွန်ပျုတာအတွက် ဆော့ဝဲမျိုးစုံ ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
စာအုပ်မျိုးစုံ ၊ ဖတ်မှ...
2,630,055 people like this
2,748,317 people follow this
Contact မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) on Messenger
ထူးဆန်းထွေလာ သုတ ကမ္ဘာ
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) shared Top Mother Beach Resort's album.
Top Mother Beach Resort added 91 new photos to the album: ကမ်းခြေမှာ ဓာတ်ပုံလှလှရိုက်ချင်သူများ Share ထား.
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ဘယ်လိုလှအောင်ရိုက်မလဲ စဉ်းစားရခက်ရင် ဒီ Album ကို Share သိမ်းထားပါ ။ ကမ်းခြေမှာ စတိုင်ကျကျနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ဖို့ ပုံလှလှလေးတွေ စုစည်းပေးထားပါ...တယ် ။ ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းကို လာလည်မယ်ဆိုရင်လည်း ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ဖို့ စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။ ဒီဟာကို Share ထားပြီး ကမ်းခြေတွေသွားတဲ့အခါ ဒီထဲက နည်းလမ်းလေးတွေ ယူပြီးရိုက်နော် :D
လာချင်တဲ့သူတွေ လွယ်ကူအောင် ရန်ကုန်ကနေ ငရုတ်ကောင်း (ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းနား) ကိုသွားတဲ့ Express ကားလိုင်းတွေရော ထည့်ပေးထားပါတယ် ။
🚍 🚍ရန်ကုန် (ဒဂုံဧရာ အဝေးပြေး)မှတိုက်ရိုက် ပြေးဆွဲသည့်ယာဉ်လိုင်းများ
⏱YGN မှ ည 8:30 စထွက်ပါသည်။
09-43064347-09-43096965 (Aircon Bus)
⏱YGN မှ ညနေ 5:30 စထွက်ပါသည်။
⏱YGN မှ ည 8:00 ခန့်စထွက်ပါသည်။
ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းကို လာရောက်လည်ပတ်ချင်သူများ အဆင်ပြေစွာ
တည်းခိုအနားယူရန်အတွက် Sea View လုံးချင်း ဘန်ဂလို များကို
လာဖို့ လမ်းခရီးအခြေနေကိုလည်း ဖုန်းဆက်မေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်
Booking လုပ်မယ်ဆို အောက်ပါ ဖုန်းနံပတ်များကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်း ၊ ကြွေချိူင်ကမ်းခြေ ၊
ငရုတ်ကောင်းမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
လွတ်​လပ်​စွာ ပြန်​ရှယ်​နိုင်​ပါသည်​ .. ...............။
Hello,..everyone residing throughout the planet, .haveawonderful day!
By the way,I strongly takeatrust that this social unique neyond compared page will have to make everybody who wanna be one of ...the successful enterprises.. Maybe ,..besides, my imagination may be arrant nonsense.. If you wish to beasalt of the world ,you are to,must plough through beneficial literature, like this page..
The most of beings call literacyahobby ,yet I call it one of my passion..I always
get lots of acknowledges from this page ,and look foward to the same to you...little knowledge is dangerous.. So, Let's swot valuable literature... May all of you Unrivalled BUDDHA bless you?...� � � � � You re to respond me ````may it be so´´´...the best nice luck! See More
Kyaw Lwin Maw Be
Thank, Review me.
May be success your post.
My freedom ���� I like to read any post on this page�
မင်းကမဟေသီ ကိုယ်က ဂျလေပီ
ဗိုလ်​မှူးးချုပ်​​အောင်​ကြီးတို့်​က မင်းအထင်း​သေး
သိ​ကောင်းပါတယ်​...ဗိုလ်​ချုပ်​ မှူးကြီးရဲ့... .
ရှိတယ်​ဆိုတာ​ကောမင်းသိ​အောင်​လုပ်​ထားကွ.. See More
ဘဝရဲ့မရှိတဲ့အလုပ်လေး See More
Horus Minn Minn
ကျွန်တော့်အတွက်တော့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ page တခုပါဘဲ နည်းပညာ/အထွေထွေဗဟုသုတ/နှလုံးသားရသ အကုန်ရတယ်
ဗဟုသုတအစုံအလင်၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းတွေ၊၊ စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့စာတွေ အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ပါစေ...
အရမ်းကို ကြိုက်​နှစ်​ သက်​ပါတယ်​ ရှင်​
​အောင်​မြင်​မှူ​တွေ များကြီး ရပါ​စေရှင်​
ဗဟုသုတများစွာကိုတင်ပေးတဲ့မောင်( စွယ်စုံကျမ်း ) ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တင်ပေးထားတဲ့စာတွေက လေ့လာသူတွေအတွက်တန်ဘိုးရှိပါတယ်။ ထာဝရအေးပေးသွားမှာပါ။
အရမ်းသ​ဘောကျတယ်​ စိတ်​ဝင်​စားတယ်​ ဗဟုသုတလဲရ
မင်္ဂလာပါ ရှင့်​ ​ ​မောင်​စွယ်​စုံကျမ်း
Zon Moe Phyu
ဗဟုသုတအစုံရတဲ့အတွက် see first လုပ်ထားပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ စွယ်စုံကျမ်း အကုန်အစုံ သိရတော့
စာများများဖတ်တော့သိရ မြင်ရ ကြားရတော့
မ အ တာပေါ့နော်
ဒီနေ့ ရွာတာ မိုးသီး​တွေပုံကြမ်း​နေတာပဲ ပျော်ဘွယ်မှာ
ရဲလား ရဲရင်​ တက်​ခဲ့